Somali / Farriin muhiim ah oo ku saabsan caqabadaha miisaaniyada CCSD
Waxaan rabaa inaan idinla wadaago macluumaad muhiim ah oo ku saabsan caqabada weyn ee xaga miisaaniyada ah oo aan wajahayno hada ka degmo dugsi ahaan.
Gobolka Colorado wuxuu raadinayaa inuu ka jaro $ 3.4 bilyan miisaaniyadiisa. Taasi waxay ku keeni doontaa dhimis halis ku ah waxbarashada dugsiyada K-12 oo aan horey loo arag. Sanadka soo socda, Iskoolada Degmada cherry Creek waxey la kulmi doonaan hoos u dhac miisaaniyadeed oo kabadan ila $ 60 milyan oo doolar, sababtuna ay qeyb weyn tahay maalgelin aan ku filnayn oo ka imanaysa gobolka Colorado iyo waliba kharashaadka laxiriira faafitaanka COVID-19.
Waxaan rabaa in aan bulshadeena si cad oo ugu muujiyo. Miisaaniyada dhan $ 60 milyan oo ka go'aaysa dakhligeena waxay ubaahantahay adkeysi dheeraad , iyadoo ay jirto hoose u dhac dheeraad ah oo aan ku aragnay dhaqaalaha wadanka guud ahaan waxayna khatar ku tahay awoodeena iyo balan qaadkeenii ahaa inaan gaarsiino arday kasta waxbarasho heer sare ah
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan hogaaminayay wadahadalo aan la yeeshay kooxaha waalidiinta, Hawlaha Miisaaniyadda iyo Golaha Guurtida oo ku saabsanaa sida aan u ilaalin lahayn tacliinteena heerka sare ah ee ardaydeena gaaraysa 55,000 iyada oo gobolka Colorado uu naga jaray boqolaal milyan oo doolar. Caqabadaha xaga miisaaniyadeed waxaa noo raacay qiimaha oo kor u kacay iyo hoos u dhaca ku yimid diiwaan gelinta mustaqbalka dhow.
Howl wadeenada miisaaniyada waxay talooyin taxana ah u gudbiyeen Gudoonka waxbarashada oo ku saabsan sida aan usii wadi lahayn tacliin heer sare ah anaga oo yareyneyna kharashaadka, raadinta ila cusub ee dakhliga waxaana ka codsaneynaa bulshadeena in ay ansixiyaan bond-damaanad iyo doorashada miisaaniyada sanadka 2020.
Tan waxay ahayd kahor intii aaney dhicin masiibadan, noloshana aan isbedelin. xaaladda miisaaniyadeenana waxay noqotay mid aad u xun.
Markii aan ka fekero baahida miisaaniyada loo qabo hoos u dhaca $ 60 milyan, madaxayga iyo wadnahayguba waxay toos u aadaan hal meel oo ah - caruurteenna. Marka waxaan rabaa inaan si daacad ah uga hadlo saamaynta ay ku yeelan karto hoos u dhacan bulshadeena.
Markey ugu xuntahay,miisaaniyada hoos u dhacaysa ee xaga gobolka waxay nagu kalifi doontaa yaraynta macalimiinta iyo shaqaalaha. fasalada waa la kordhin doonaa barnaamijyadaana waa la yareyn doonaa. Degmo Dugsiyeedka cherry Creek uma ekaan doonto degmo dugsiyeedkii aan naqaanay 70kii sano ee la soo dhaafay.
Ka sokow dhimista mushaharka ee dhamaan shaqaalaha oo hirgelaya 1da July ee sanadkan, dhamaan shaqaalaha Iskoolada Degmada Cherry Creek waxay qaadan doonaan maalmo fasax galin ah sanadkaan oo laga yaabo inay ku keento dhimista xaga mushaharka mustaqbalka.
Markii aan tixgelinay talaabooyinkan aadka u adag ee dhimista-dhaqaalaha, waa inaan sidoo kale tixgelinaa weydiinta bulshadeena in ay fahmaan inta lagu jiro waqtiga adag. Waxaan weydiisan doonaa Gudiga Waxbarshada inay iclaamiyaan doorasho kor loogu qaadayo dakhliga deyrtaan -fallka taasoo gacan ka geysaneysa in la yareeyo saameynta dhaqaala xumada ay ku yeelan karto iskooldeena.
Uma dhahayo waxyaabahan inaan argagax ku abuuro bulshadeena, laakiin waa in la muujiyo daahfurnaan iyo inaan bilaabno wada hadal iyo wada tashi bulsho ahaan ah oo ku saabsan sida aan isugu imaan lahayn si aan iskooladayada u badbaadinno oo aan u ilaalino tacliinteena heerka sare ah ee Cherry Creek.
Waxaan rabaa in codadkiinu ay qayb ka noqdaan wada hadalka. Ka sokow boqolaalka qof ee wax ku soo kordhiyay ra'yi-celinta iyaga oo u maraya gudiyada ka qeyb-qaadashada waalidka iyo xoogaga howlaha bulshada, waxaan weydiisan doonaa inay ka-qeyb-galaan asbuucyada soo socda sahan ku saabsan in aan qiyaasno ahmiyadaha ugu waaweyn degmo dugsiyeedkeena.
Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan xaalada miisaaniyadeena hada websaydkeena. https://www.cherrycreekschools.org/site/Default.aspx?PageID=12462. Si aad ugu tarjumato websaydka Qorsheynta mustaqbalka, ka xulo luqadaha liiska tarjumaada ee barta madow. Fadlan la xiriir Omar Nur cinwaanka Emaylka-onur2@cherrycreekschools.org si aad u heshid macluumaad ku qoran luqadaada.
In kasta oo xaalada miisaaniyadeena ay liidato, waxaa hadana rajo iyo dhiirigelin i galisay balanqaadka ay bulshadan u muujineyso ardayda iyo qoysaska. Waxaad muujiseen dadaal iyo hufnaan intii lagu jiray waqtigan adag, waxaadna caawiseen deriskiina iyo bulshadiina. Waan ogahay inaan u wada kici doono si aan u hubino ardaydeena inay helaan waxbarashadda ay u qalmaan iyo mustaqbalka ay arkaan.
La soco wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan miisaaniyadeena iyo siyaabaha aad uga qeybqaadan karto. Waxaan rajeynayaa inaad ku nasataan xasilooni nabdoon waqtigan hada , waxaan rajeynayaa inaan sii wado wadahadalkan.